Al-Shabaab oo adoonsata dumar si ay ugu galmoodaan - BBC News Somali
Markii Salma Cali ay billowday baaritaanka halka ay qabteen labo wiil oo la dhalatay sannadkii la soo dhaafay ayaa waxaa u soo baxay wax kale oo ka yaabiyay. Waxay ogaatay in ka sokow ragga u safray Soomaaliya si ay ugu biiraan Shabaabka ay sidoo kalana jiraan haween ay kooxdu qafaalatay si ay uga dhigtaan addoomo ay u galmoodaan.
Salma ayaa si qarsoodi ah u waday baaritaanka xog ku saabsan halka ay walaaladeed ku dambeeyeen. Sababtoo ah haddii la tuhmo in ay kooxda Al Qaacidda xiriirka la leh ay ku biireen, waxaa ka dhalan karta in xoogagga ammaanka ay arrimahaasi fiiri gaar ah u yeeshaan. Mana aysan rabin Salma sidaa.
Sidaas darteed ayay si qarsoodi ah ugu xan qarsatay haween kale oo ku nool Mombasa iyo deegaannada u dhaw iyadoo ka war doontay inay jiraan iyo in kale rag sida walalaheed oo kale maqan.
"Waxaan ogaaday in dadka xaaladeyda oo kale ku sugan ay badan yihiin," ayay tiri Salma.
Balse Salma waxay sidoo kale ogaatay arrin taasi ka duwan — sheekooyin la xiriira in haweenka si qasab ah loogu kaxeeyo Soomaaaliya.
Haweenka waxay isugu jiraan kuwa da' yar, kuwa waaweyn, Masiixi iyo Muslimiin ku nool Mombsa iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka xeebta.
Waxaa inta badan loo ballan qaaday shaqooyin lagu siin doono mishaar badan amaba in dibedda loo dhoofin doono si ay u soo shaqeystaan. Balse taas badalkeeda waa la afduubay.
Bishii Sebtembar ee sannadkii hore, Salma waxay qaadatay tababar sida loo bixiyo la talinta dhibbaneyaasha, waxayna alkuntay xarun qarsoodi ah oo ay ku taageerto haweenka soo laabanaya.
"Markaan kulanay kalsooni ayaa abuurantay" ayay tiri Salama
Haween badan oo soo laabtay ayaa u yimid markii ay maqleen jiritaanka xarunta lagula taliyo dhibbanayaasha soo laabtay.
Qaarkood ayaa la soo laabtay carruur, waxaana laga helay HIV, qaarkood xannunnada dhimirka ayaa ku dhacay.
Qol mugdi ah oo ay si qarsoodi ah ugu kulmaan haweenkan ayay BBC-du booqatay, waxayna nala wadaageen sheekooyin aan horay loo maqlin.
" Rag ayaa intay ii yimaadaan ii galmoon jiray—Xitaa tiradooda kuuma sheegi karo. Saddexdii sano ee aan halkaa joogay, nin kasta ayaa ila seexan jiray", ayay tiri mid ka mid ah haweenka.
Sarah, oo ah xaaska nin horay uga tirsanaa Shabaabka ayaa sheegtay inuu jiro barnaamij lagu diyaarinayo jiilka xiga ee dagaalamayaasha kooxda
" Gabadh kasta oo meesha joogtay labo ilaa saddex rag ah ayaa habeen kasta u galmoon jiray", ayay tiri haweenay kale.
Qaarkood waxaa lagu khasbay inay " xaasas" u nqodaan mintidiinta Al Shabaab, waxayna u muuqataa in qaar kale si addoonsi ah xoog loogu heystay si loogu galmoodo.
Al Shabaab waxay u dagaalmeysaa inay dowlad Islaami ah ka hirgeliso Soomaaliya, waxayna weerarro ka geysatay dalalka deriska ah ee ciidammada u diray Soomaaaliya.
Kenya waxaa ka dhacay weerarro badan oo ay Shabaabku ku sheegeen in ay yihiin kuwa aargoosi ah. Ciidammada Kenya ayaa keynta baaxadda weyn ee Boni ee u dhaw xadka Soomaaliya ka baadigoobaya dagaalamayaasha Shabaab.
Marka aad diyaarad ku dulmarto keyntan, waxaad arkeysaa dhabbo cariiri ah oo ay mintidiintu sameysteen si ay u maraan. BBC-du waxay la hadashay in ka badan 20 haween ah oo dhammaantood ka hadlay in la dhexmariyay howd cidlo ah. Waxay u badan tahay in hawdkaasi uu yahay Boni.
Faith oo mar dhaw uun ka soo baxsatay qafaalashadii ayaa ah xubin cusub oo ka tirsan kooxda Salma.
Iyada oo 16 jir ah ayay lamaane da' ahi u yimaadeen una soo bandhigeen shaqo ay ka siinayaan magaalada Malindi oo xeebta ku taalla.
Iyadoo shaqo aad ugu baahan ayay maalintii labaadba fuushay bas ay saaran yihiin 14 ruux oo kale, dhammaantoodna waxaa la siiyay biyo daroogo lagu daray si ay u cabbaan.
"Markii uu miyirku noo soo noqday waxaan aragnay anaga oo joogna qol ay labo nin ku jiraan," Ayay tiri Faith.
Indhaha ayay maro madaw nagaga xireen. Qolkaas gudahiisa ayayna nagu kufsadeen."
Markale ayaa daroogo la siiyay, Faith-na waxay soo toostay iyadoo joogto kayn mugdi ah waxaana loo sheegay in la dili doono haddii ay isku daydo in ay baxsato.
Iyadoo aad u baqaysa oo kaligeed ah ayay saddexdii sano ee xigtay cunto u karin jirtay rag Soomaali ah oo "gar waawayn".
Image caption Faith iyo gabadheeda
Uur ayayna ka qaaday kufsigii loo gaystay iyada oo kaligeed ah ayay ilmo ku dhashay kaynta.
"Ayayday hooyo ayaa ahaan jirtay umuliso dhaqameed, sidaas daraadeed aqoon yar ayaan u lahaa hawsha umulinta," ayay tiri waxayna intaas ku dartay in "anigoon cid kale i wehelinin ayay fooshu i qabatay aniga ayaana canugga iska dhaliyay".
Faith ugu dambayn waxaa u suuragashay in ay soo baxsato iyadoo ay gabadheedii yarayd weheliso ka dib markii uu wadada tusay qofka hab dhaqameed wax ku daweeya oo arkay isaga oo kaynta ka raadsanaya dawo dhaqameed.
Gabadheeda oo iyada oo aan dhar xiranin ku soo kortay kaynta ayaa hadda la qabsan la' nolosha magaalada.
Waxay kortay iyadoo la qabatintay "in aan u noolaanno sidii xayawaanka kaynta oo kale", ayay tiri Faith.
Tiro dumar ah oo la hadlay BBC ayaa kaymaha ku dhalay iyaga oo afduub loo haysto.
Muuqaalka keynta Boni ee xadka Soomaaliya iyo Kenya
Sarah, oo ah xaaska nin horay uga barbardagaalmi jiray Al Sahbaab ayaa sheegtay inuu jiro barnaamij lagu abuurayo jiilka xiga ee dagaalamayaasha.
"Xerada aan joogay waxaa laga soo diray haween si ay u soo qoraan haween kale oo ay xerada u keenaan," ayay tiri Sarah. "Waxay rabaan inay helaan haween u dhala jiilka xiga ee dagaalamayaasha."
Inta badan 300 oo haween ah oo ku noolaa xerada aan joogay waxay u dhasheen Kenya, ayay tiri.
Salma waxay sidoo kale taageertaa qoysaska eheladooda ku waayay sida Elizabeth, oo walaasheed la waayay 2 sano ka hor iyagoo markii hore u haystay inay Sacuudiga u doonatay shaqo.
Bil ka dib ayayseqoyskooda ay dib u soo wacday.
"Waxay noo sheegtay inay ku sugan tahay goob aad u xun misana khatar badan leh oo gudaha Soomaaliya ah," ayay tiri Elizabeth. Khadka ayaa ka go'ay mar dambana warkeeda lama maqlin.
Dowladda Kenya inkastooy qirsantahay inay dhibaatadu jirto, haddana Evans Achoki, oo ah guddoomiyaha Mombasa wuxuu qabaa inay adagtahay in qiimeyn laga bixiyo heerka ay gaarsiisan tahay maadama haweenka dhibaatada la kulmay aysan dowladdu macluumaadkaasi la wadaagin.
Inkastoo uu jira barnaamij ay dawladda cafis ugu fidineyso dagaalamayaasha ka soo laabanayo Soomaaliya oo weliba qaarkood dhaqan celin looo sameeyay, haddane waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in dad lagu tuhmay inay Shabaab ka tirsan yihiin la waayay ama la khaarijiyay.
"Dadka dowladda ayay ka cabsoodaan," ayay tiri Sureya Xersi oo ka tirsan hay'adda ' Gabdhaha aan Xudduuda lahayn' oo fadhigoodu yahay gobolka xeebta kana shaqeeya la dagaalanka xagjireynta dhallinyarada.
" Labaduba, kuwa iskood u aaday iyo kuwa lagu khasbayba, waxaa loola dhaqmaa inay dambiilayaal yihiin."
Magacyada haweenka sheekadan waa la badalay sababa la xiriira ammaankooda.